कसरी प्रयोगकर्ताहरूले पिन्टेरेस्टसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन् Martech Zone
कसरी प्रयोगकर्ताहरूले पिन्टेरेस्टसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्
शुक्रबार, फेब्रुअरी 22, 2013 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
यस हप्ता मलाई क्षेत्रीय रचनात्मकहरुमा बोल्ने प्यानलमा हुन आमन्त्रित गरिएको थियो (अडियो यहाँ छ) सँग मिटअपमा ढाँचा पत्रिका। हुनसक्छ अरू कुनै समूह भन्दा रचनात्मकसँग भिजुअल सामाजिक माध्यमहरू जस्तै फाइदा लिन अविश्वसनीय अवसर छ लहरा, इन्स्टाग्राम or Pinterest.
यो दृश्य गाइड विवरण कसरी प्रयोगकर्ताहरूले पिन, बोर्डहरू, अन्य प्रयोगकर्ताहरू र Pinterest मा ब्रान्डहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन्। बाट शुभकामना
पिन्टेरेस्टमा प्रारम्भिक तथ्या .्कले शिल्पकारहरू, कलाकारहरू र फैशनिस्टहरू द्वारा छिटो अपर्णको बारेमा कुरा गरे। जे होस्, जब हामी हाम्रो शुरू गर्थ्यौं मार्केटिंग इन्फोग्राफिक बोर्ड, हामीहरू थियौं र हामीले प्राप्त गरेको महान ट्राफिकमा हामी छक्क पर्दछौं। Pinterest एक शक्तिशाली दृश्य प्लेटफर्म हो किनभने यो सयौं दृश्यहरु को माध्यम बाट पृष्ठ गर्न को लागी सरल छ जब सम्म एक जना तपाईंको आँखा नचलाउँछ।
टैग: अन्तर्क्रियालाभ उठाने पिनरेस्टPinterestpinterest आँकड़े
अम्बर निकोल गार्जा
फेब्रुअरी १,, २०११ 26:१:2013 अपराह्न
म भन्ने कुरा सुरू गर्न चाहान्छु कि म सूचना-ग्राफिक्सको लागि एक शोषक हुँ, निस्सन्देह मैले यो पढ्ने थिएँ!
मलाई पिन्टरेस्ट मनपर्छ र कतै एक महिला, कलेज विद्यार्थीको रूपमा म धेरै समय "पिनि” "खर्च गर्दछु। एक सार्वजनिक सम्बन्ध र विज्ञापन विद्यार्थीको रूपमा, म मद्दत गर्न सक्दिन तर उपभोक्ता व्यवहारलाई प्रभावित गर्नमा पिन्टरेस्टको भूमिका बारे उत्सुक हुन। मलाई लाग्छ कि पिन्टरेस्ट जस्ता साइटहरू नि: शुल्क विज्ञापन पाउनको लागि एक शानदार तरीका हो! मलाई लाग्छ कि भविष्य सामाजिक मिडियाको वरिपरि घुम्ने, जनताको जीवनमा विज्ञापन र प्रचार लुक्नको लागि धेरै रचनात्मक तरिकाहरू हुनेछ।